တို့သူငယ်ချင်းများ စစ်ထဲဝင်ရင်လေ…. | ဥက္ကာကိုကို
တို့သူငယ်ချင်းများ စစ်ထဲဝင်ရင်လေ….	Posted by oakkarkoko on January 16, 2011
Posted in: သရော်စာ.	1 Comment
ဥက္ကာ: ဟေး… ကိုကြီးညို
professionalguiterist: ဗျ ကိုကြီးကာ
ဥက္ကာ: ကျုပ်တို့တွေ စစ်မှုထမ်းကြရတော့မယ်ဆိုပဲကိုးဗျ
ဥက္ကာ: အာ…. လောင်ချာတို့…. အမ်တစ်ဆယ့်ခြောက်တို့… ရိုင်ငဖယ်တို့…. စတင်းဂိန်းတို့ကိုပြောတာဗျ
ကျုပ်ဖြင့် တစ်ခါမှတောင် မကြားဖူးပါဘူးဗျာ
နော့လေ နော့လေ နော့လေ နော့း)
ဥက္ကာ: စစ်ထဲဝင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ 18 နှစ်ကနေ 45 နှစ်အထိပါတယ်ဆိုပဲဗျ
ဥက္ကာ: ဂယ်ကြီးမှ ဂယ်ပေါက်ကြီးဗျ
ကျုပ်တူတောင် အခုမှ ဆယ့်ရှစ်ပဲရှိသေးတယ်
ဒါဆို အမေရိကန်ထိ လှမ်းပစ်လို့ရတယ်
professionalguiterist: အာာာာ ဘယ်ကလာ….
ဥက္ကာ: ကျုပ်ကသတင်းထောက်ဆိုတော့ စစ်ထဲမှာ သတင်းယူလို့ရတယ်…
ခင်ဗျားက ကွန်ပျုတာသမားဆိုတော့ စစ်တိုက်ရင်အင်တာနက်ဆိုင်ဖွင့်စားလို့လွယ်ပါ့မလားစဉ်းစားနော
ကျုပ်က စာစီစာရိုက်ကတော့ ကောင်းကောင်းရတယ်လေ
စစ်တပ်ထဲမှာ ကွန်ပြူတာရိုက်စာရေးလောက်တော့ လုပ်လို့ရမှာပါ
ဥက္ကာ: စစ်ထဲဝင်တာကအရေးမကြီးဘူး… ကျုပ်တို့ တစ်နိုင်ငံလုံးစစ်သားလုပ်ရင်
ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီအသေခံရမယ့်ကိန်း၊ ကိုယ့်ကုတို့ခနဲ့ကိုယ် သေရွာလားရမယ့်ကိန်းဗျို့
professionalguiterist: ဗရာကြော်သည်လေးကို သတင်းစာ တစ်အုပ်ပေးလိုက်
သူက ဗယာကြော် တစ်ကတော့ ပေးလိမ့်မယ်။
ဥက္ကာ: မြန်မာ့အသံမှာတော့လွှင့်နေတာပဲ…. ရဲဘော်မသေ သေသော်ငရဲမလားဆိုပဲ
professionalguiterist: မကြောက်ပါနဲ့ ကိုကြီးကာရယ်
ခင်ဗျားလည်း မိန်းမတောင် မရသေးဘူး ကြောက်တတ်နေလိုက်တာ
ဥက္ကာ: ဒါနဲ့ ဘလော့ဂါတွေစစ်ထဲဝင်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူးနော်….
သူတို့ခမျာ… စစ်လည်းတိုက်ရသေး… ခဏခဏ အဘမ်းခံရပြီး
Access has been denied လည်းအလုပ်ခံရသေးနဲ့…ဟေးဟေး
professionalguiterist: စစ်တပ်ထဲမှာ မဘန်းဘူးထင်တယ်နော့
ကဗျာသစ်တွေပေါ်လာမှာ… လောင်ချာမော်ဒန်တို့…. လက်ပစ်ဗုံးမော်ဒန်တို့… AK-47မော်ဒန်တို့….
professionalguiterist: အဲ့ဒိမှာ ကာရန်နဲ့ မော်ဒန်တွေ တပ်စိတ်တစ်စိတ်ထဲ ဖြစ်ရင်တော့ မလွယ်ဘူးဗျို့
မော်ဒန်က ဗိုလ်ကြီးဖြစ်ပြီး ကာရန်က တပ်သား ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့
မော်ဒန်အမိန့်ပေးတာမှ ကာရန်က လုပ်ပါ့မလား
ဥက္ကာ: ကဗျာဆရာအောင်ရင်ငြိမ်းတို့ ဇေယျာလင်းတို့ကို အရာခံဗိုလ်ကြီးတွေခန့်သင့်တာဗျ…
အသက်ကြီးပေမယ့် ရာထူးကမတက်… တုတ်တစ်ချောင်းနဲ့ ရဲဘော်တွေကို လိုက်အော်ကြိမ်းမောင်း…. ဟိဟိ
professionalguiterist: ဆရာဇေယျာလင်းကတော့ လွတ်တယ်လေ
ဥက္ကာ: အဲ .. ဟုတ်သားဗျ…
professionalguiterist: အသက်ငယ်ချင်စိတ်တွေ ကုန်ပါတယ်ဗျာ
ဥက္ကာ: ကဗျာဆရာအေမွန်ဆိုရင်မိုက်တယ်ဗျ… လူကသေးသေးလေးဆိုတော့ ရန်သူကမမြင်နိုင်ဘူး….
ခြုံလေးကွယ်ပြီး သေနတ်ဘေးချ ကဗျာရေးရုံပဲ
ဒါနဲ့ စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာ မိန်းကလေးတွေရော စစ်မှုထမ်းရမယ်တဲ့ကိုကြီးညိုရေ
professionalguiterist: ခင်စန်းဝင်းကြီးကို စစ်ကေနဲ့ မြင်ကြည့်စမ်းပါဗျာ
ဥက္ကာ: သူတို့ဆိုရင်လည်း မိုက်မယ်.. သေနတ်လေးတထောင်ထောင်နဲ့… ဟဲ့… လက်နက်ချလို့ပြောနေတယ်နော်..
. ငါ ဆွဲမှုတ်ပစ်လိုက်မှာနော်… လက်နက်ချပါဆိုမှ…
မောင်လေးကလည်း…. ဇွတ်….လူဆိုး…. ဟင့်… ဆိုပြီး…. ဟီးဟီးး
ဥက္ကာ: စစ်တိုက်ရင်းနဲ့ မိန်းမ စစ်သားတွေ ကိုယ်ဝန်ကြီးထွက်လာရင်တော့ဘယ်ကြည့်ကောင်းမလဲနော်
ကဗျာဆရာတွေ သေနတ်ကြီးတယမ်းယမ်းနဲ့ လေထန်ကုန်းမှာ လက်ဖက်ရည်သောက်နေကြတုန်း
၀ုန်းဆို ဗုံးထပေါက်တာမျိူးမြင်ယောင်သဗျာ…. ခစ်ခစ်ခစ်
ဥက္ကာ: ဘလော့ဂါကဗျာဆရာသူရဿဝါကို စစ်ယူနီဖောင်းကြီးနဲ့ပုံကို ဖိုတိုရှော့နဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်ဗျာ
ဥက္ကာ: ခင်ဗျားကော စစ်တပ်ကဆင့်ခေါ်ရင် ချက်ချင်းထလိုက်မှာလား
professionalguiterist: လွတ်မလားလို့ ပြေးကြည့်ဦးမယ်လေဗျာ
ခက်တာက နိုင်ဂျန်ဂါးကို ပြေးဖို့တောင်
ဥက္ကာ: ကျနော်တို့ ဘလော့ဂါကဗျာဆရာတွေ စစ်မြေပြင်မှာဆုံကြရင်
ကျုပ်တို့က စစ်ထဲဝင်ပြီး ဘယ်နိုင်ငံကိုသွားဆော်ရမှာတုန်း
မနက် တီတီ လုပ်
ဥက္ကာ: ဒါဆိုကျုပ်တို့က ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဗိုလ်တာရာတို့လို သေနတ်ကြီးကိုင်ပြီး
ဥက္ကာ: ကျုပ်လက်ထဲသေနတ်ရောက်ရင်တော့ဗျာ…. အကြွေးမပေးတဲ့
ဥက္ကာ: ပြီးရင် ငါ့နာမည် ရဲဘော်ကိုကြီးညိုကွ…ဆိုပြီး အကျယ်ကြီးအော်ခဲ့မှာ
professionalguiterist: ကျောင်းဆရာ…အဲ့လေ… ကြောက်ဆရာကြီးပါလား
ကဲဗျာ….. ကျုပ်လည်းစစ်ထဲဝင်ရမယ့်ကိစ္စကိုရင်ခုန်ရင်း တစ်ရေးနှပ်လိုက်ဦးမဗျို့….
တပ်ထဲမှာ မိန်းကလေးတွေရော အခြောက်တွေရောပါလာရင် မာဆတ်တောင်ဖွင့်စားလို့ရတယ်ကိုယ့်လူ
ဥက္ကာ: သေနတ်ပြောင်းဝ အချင်းချင်းပြန်မချိန်ကြေးနော်ကိုကြီးညို
← ညတုန်းကကြည့်တဲ့မှန်	အဲဒီလို တဖြည်းဖြည်း နီးမလိုနဲ့ဝေး →	One comment on “တို့သူငယ်ချင်းများ စစ်ထဲဝင်ရင်လေ….”
Thor on April 28, 2011 at 5:44 am said: